नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : निर्वाचनको मुखमा सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा एक हजार २ सय ७८ जना आफ्ना कार्यकर्तालाई करिब १६ करोड रुपैयाँ वितरण !
निर्वाचनको मुखमा सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा एक हजार २ सय ७८ जना आफ्ना कार्यकर्तालाई करिब १६ करोड रुपैयाँ वितरण !
निर्वाचनको मुखमा सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा एक हजार २ सय ७८ जना आफ्ना कार्यकर्तालाई करिब १६ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ । यो बितेको तीन महिनामा सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत कार्यकर्तालाई वितरण गरेको रकममात्र हो । सरकारबाट आर्थिक सहायताको नाममा रकम बुझ्ने कार्यकर्ताले
औषतमा एकजनाले एक लाख २३ हजार ४ सय ३५ रुपैयाँ बुझेका छन् ।
गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७३ माघ १ गतेदेखि २०७४ असार मसान्तसम्म ६ महिनाको अवधिमा दाहाल र देउवा नेतृत्वको सरकारले ५९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायताको नाममा कार्यकर्तालाई वितरण गरेका छन् । दुवै सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा कार्यकर्तालाई वितरण गरेको रकम जोड्दा ७५ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुन्छ । पछिल्लो १० महिनामा सरकारले आफ्ना सयौं कार्यकर्तालाई ७५ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ वितरण गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा आर्थिक सहायताको नाममा सरकारले १५ करोड २७ लाख ४२ हजार ५ सय ३९ रुपैयाँ वितरण भएको थियो । यो एक वर्षमा आर्थिक सहायताको नाममा वितरण भएको रकमभन्दा बढी वर्तमान सरकारले पछिल्लो तीन महिनामा वितरण गरेको देखिन्छ ।